Ny Xiaomi Mi 10 Ultra no finday misy fakantsary tsara indrindra amin'ny rehetra [Review] | Androidsis
Hatramin'ny nanombohany ny volana martsa tamin'ity taona ity, ny Huawei P40 Pro Noderain'ny manam-pahaizana tao amin'ny DxOMark izy noho izy finday manome valiny sary tsara indrindra. Ary io dia noho ny combo mahery an'ny sensor quadruple an'ny solosaina lehibe 50 MP, mpitifitra telephoto 12 MP miaraka amin'ny zoom optika 5X, fakan-tsary 40 MP zoro malalaka ary sensor 3D ToF dia tsy manome kely kokoa, io no ilay olona tompon'andraikitra amin'ny fametrahana ny finday eo an-tampon'ny laharana.
El My 10 Ultra Io no finday avo lenta afaka mandondona ny P40 Pro. Natolotra vao andro vitsivitsy lasa izay ho toy ny sainam-pirenena Xiaomi vaovao, miaraka amin'ireo lohateny sy famaritana faran'izay betsaka ary fanamafisam-peo fakan-tsary mihoatra ny an'ny telefaona finday. Huawei , araka ny fitsapana izay nataon'ny DxOMark ary mamela antsika hahita amin'ny famerenany farany.
1 Ho an'ny sary tsara indrindra, ny Mi 10 Ultra no safidy hisafidianana
1.1 Ahoana no mampiavaka azy ao amin'ilay faritra video?
Ho an'ny sary tsara indrindra, ny Mi 10 Ultra no safidy hisafidianana
Ny Xiaomi Mi 10 Ultra, miaraka amina fakan-tsary 48 MP (main) + 48 MP (telefaona 5X) + 12 MP (telefaona 2X) + 20 MP (zoro mivelatra), dia nahatratra naoty 130 tamin'ny fisedrana DxOMark, noho izany maka ny laharana voalohany amin'ny laharana, ambonin'ireo efa voalaza P40 Pro (128), ny Honor 30 Pro + (125) ary ny Oppo Find X2 Pro (124), izay telo manaraka amin'ny tena izy. Fanampin'izay, avo lenta ny isa azony sary 142.
Naoty fakan-tsarimihetsika Xiaomi Mi 10 Ultra | DxOMark
Ny isa miavaka amin'ny sary dia miorina amin'ny fahombiazana tsara mbola sary amin'ny faritra fitsapana rehetra. Ny fakantsary dia mahazo ny fotony rehetra amin'ny ankabeazan'ny fotoana, toy ny fantsom-panazavana, ny famerenana ny loko, ary ny fifandanjana fotsy, ary manolotra faritra mavitrika be dia be, misambotra antsipirihany tsara ao amin'ireo faritra mamiratra sy maizina amin'ilay seho. Izany no mahatonga azy ho tsara amin'ny fitifirana amin'ny toe-javatra mifanohitra avo lenta, hoy ny ekipa DxOMark.
Safidy lavorary koa izy io ho an'ireo mpaka sary izay tia manovaova faran'izay betsaka araka izay azo atao, eo amin'ny lafiny elanelam-potoana. Ny fakantsary fakan-tsary an'i Xiaomi dia manome ny fomba fijery malalaka indrindra hatramin'izay Ary amin'ny faran'ny farany, 120mm mitovy fahitana telephoto mitovy manome manome mihoatra ny ankamaroan'ny mpifaninana. Ankoatr'izay, ny kalitaon'ny sary dia mamela kely hitaraina momba ny zoro zoom rehetra, tsy misy afa-tsy fahaverezan'ny endriny sy haavon'ny tabataba somary avo kokoa eo amin'ny toerana faran'ny zoro sy lava indrindra.
Ny mpaka sary amin'ny alina sy mazava ihany koa dia ho faly amin'ny Mi 10 Ultra. Xiaomi dia nahavita fifandanjana tsara teo amin'ny firafitra sy ny tabataba amin'ny sary nalaina tamin'ny toe-javatra maivana, ary ny fakan-tsary dia mahavita fampirantiana tsara, na dia amin'ny hazavana ambany aza.
Ny tifitra sary notifirina tamin'ny fomba bokeh dia mampiseho ny tsy fahalavorariana mitoka-monina kely manodidina ny lohahevitra akaiky, saingy ny vokatra manjavozavo dia toa voajanahary ary ny sary bokeh amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny ambaratonga hafa.
Ahoana no mampiavaka azy ao amin'ilay faritra video?
Ny Xiaomi Mi 10 Ultra koa dia mifindra amin'ny laharana voalohany amin'ny horonan-tsary, noho ny naoty video miavaka 106. Io no fitaovana voalohany notsapain'ny DxOMark izay mahatratra ny valiny tsara indrindra amin'ny famaha ny 4K sy ny taha 60fps.
Ny haingam-pandeha fps dia miantoka ny fivezivezena milamina sy ny fikorontanana amin'ny toe-javatra rehetra. Matetika ny fampiasana 60fps na ny tahan'ny endriny haingana kokoa dia midika hoe mila milefitra amin'ny faritra hafa, fa ny telefaona kosa afaka mamoaka sarin-javatra tsara, loko mahafinaritra ary antsipiriany tsara, eny fa na dia mitifitra amin'ny hazavana ambany aza. .
Haingam-pandeha ary tsy miova koa ny autofocus, ary ny rafitra fanamafisana dia manohitra ny hetsiky ny mpaka sary amin'ny fomba mandaitra. Mety ho midadasika kokoa ny elanelam-potoana maivana ary azo jerena amin'ny sary mihetsika mifanohitra be ny sary nohetezina sasany, fa amin'ny ankapobeny, ny Mi 10 Ultra dia mirakitra horonantsary finday avo lenta tsara indrindra, mamarana ny DxOMark.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Mi Xia Ultra an'ny Xiaomi dia mandika ny Huawei P10 Pro ho finday miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra ho an'ny rehetra [Review DxOMark]
Ahoana ny fametrahana GCam amin'ny OnePlus Nord anao